Umbulelo WamaKristu Umthandazo Wokubonisa Ukubulela Kwakho
Unqulo & Umoya Ubomi BamaKristu Kubaselula
Umthandazo WamaKristu Wokubulela
Nanini na xa sivakalelwa ngokunyanisekileyo ngethamsanqa yethu, ngokuphumelela kwethu okanye ngobubele babanye , eli lixesha elihle lokunikela umthandazo wokubulela kuThixo, kuba ukuqonda kwamaKristu kukuba zonke izinto ezilungileyo zivela kuThixo. Enyanisweni, iintsikelelo ezinjalo zijikeleze sonke ixesha, kwaye ukuyeka ukubonisa ukubonga kwethu kuThixo yindlela efanelekileyo yokuzikhumbuza ukuba sinokubaluleka kangakanani ebomini bethu.
Naluphi na unokubanombulelo , nantsi umthandazo olula wokubonga ukuthetha.
Ndiyabulela, Nkosi, ngenxa yeentsikelelo ozibeke ebomini bam. Undibonelele okungaphezulu kunokuba ndibe ndicinga ngako. Undijikelezile nabantu abahlala bendikhangelele. Uninike intsapho kunye nabahlobo abandibusisayo imihla ngemihla ngamazwi anomusa nangezenzo. Bandiphakamisa ngeendlela ezigcina amehlo ami agxile kuwe kwaye enze umoya wam uphuke.
Kwakhona, ndiyabonga, Nkosi, ngokugcina undikhusele. Undikhusela kwizinto ezibonakala zikhohlisa abanye. Unceda ndenze ukhetho olungcono kwaye undibonelele ngabacebisi ukuncedisa ngezimvo ezinzima zobomi. Uthetha nam ngeendlela ezininzi ukuze ndihlale ndiyazi ukuba ulapha.
Yaye, Nkosi, ndinombulelo ngokugcina abo bendijikelezile nabathandekayo. Ndiyathemba ukuba undibonelela ngamandla kunye nokuqonda ukubonisa imihla ngemihla ukuba luba lukhulu kangakanani. Ndiyathemba ukuba undiphe amandla okubanika ububele obufanayo abandinike wona.
Ndiyabulela kakhulu ngeentsikelelo zakho ebomini bam, Nkosi. Ndiyathandazela ukuba undikhumbuze ukuba ndiyintsikelelo kangakanani kwaye awuze wandivumela ukuba ndilibale ukubonisa ukubonga kwam emthandazweni kwaye ndibuyisele izenzo zobubele.
Ngegama lakho, Amen.
Ukubonisa Ukubulela Ngevesi ZeBhayibhile
IBhayibhile igcwele iindinyana onokuzibandakanya kwimithandazo yakho yokubulela. Nazi ezinye ezimbalwa ekufuneka ukhethe kuzo:
Wena unguThixo wam, ndiya kukudumisa! Wena unguThixo wam, kwaye ndiya kukuphakamisa! Mbonge iNkosi, ngokuba ulungile! Uthando lwakhe luhlala ngonaphakade. (INdumiso 118: 28-29, NLT )
Jabulela rhoqo, thandaza rhoqo, ubulele kuzo zonke iimeko; kuba oku kukuthanda kukaThixo kuKristu Yesu. (1 Tesalonika 5:18, NIV )
Ngoko ke, ekubeni sisamkela ubukumkani obungenakuzanyazanyiswa, masibulele, kwaye simnqule uThixo ngokumhlonelayo kunye noyiko ... (Hebhere 12:28, NIV)
Konke oku, Mhloniphekile, sinombulelo kuwe. (IZenzo 24: 3, NLT)
Oko IBhayibhile Ikusho Ngokungafezeki
Indlela Yokuba Ngumhlobo OngumKristu Olungileyo
Inkqubo yokuThuthwa kweMali yokuThuthwa kweeNkxaso kwiSatifikethi seSample
Umthandazo Wokuhlonipha Umama Wakho
Iingcebiso zokuthobela abazali bakho
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo Ngokuphinga?
10 Amanga AbaKristu Abaselula Bazixela NgezoSini kunye noDating
Intsha yamaKristu kunye neZithembiso
Buyela esikolweni: Yintoni enokuyilindela Unyaka wakho ongu-Junior of High School
Iimiphumo zeMarike eNnyama kwiSibonelelo kunye neMfuno
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseNew Jersey
6 Amanyathelo eSoba sokuLawula iScuba
Ukuphindaphinda amaTricks kunye neeNcebiso zokuFunda ngokukhawuleza
Yiyiphi i-Led to Party Tea Party?
Funda iMpawu zeZodiac ngesiJamani
UHenry J. Raymond: Umsunguli weNew York Times
Abangasese kwiMfazwe ka-1812
Iincwadi Ezihlanu ZikaMoses
Funda i-ESL ngokusebenzisa uMbutho
Iinkcukacha zeDysprosium - Element 66 okanye iDy
IiNdawo eziMkhulu kakhulu
Iingoma zeKrismesi eziLwazi eziJamani kunye nesiNgesi
Iilwimi ezithatha iGerund okanye ezingenasigxina ngeTshintsho ngentsingiselo
Iimveliso zamaRoma kunye nezozimbi zazo
I-albhamu ye-Rap Best Best Posthumous
Iintlobo zeeNtshontsho zeeNyoni
Imephu yeenkampu zokuThuthukiswa nokuPhumela kwiWWII
IEP - iNkqubo yeMfundo yabanye